Dabaylaha Taariikhda Siideynta Jiilaalka La cusboonaysiiyay: La xaqiijiyay! - Madadaalo
Dabaylaha Taariikhda Siideynta Jiilaalka La cusboonaysiiyay: La xaqiijiyay!
Shirqoolkii Dabaylaha Jiilaalka
Jilaaga Dabaylaha Jiilaalka
Goorma ayaa Dabaylaha Jiilaalka la sii deyn doonaa?
Dabaylaha Jiilaalku waa khayaali lixaad oo ujeedo leh oo ku jira qoraaga Maraykanka ah ee George R.R. Martin ururinta sheeko-xariireedka weyn ee heesta barafka iyo dabka.
Labada qaybood ee ugu dambeeya ee taxanaha, sida uu qabo George Martin, waxay ka koobnaan doonaan ku dhawaad ​​3,000 bogag asalka ah. Martin waxa uu ka gaabsaday samaynta xisaabinta qalafsan ee taariikhda soo-bandhigidda sheeko-gaaban. Waxaan horeyba u jirnay kala bar sanadka 2021, walina waxaan ku soconaa wadada sii deynta Dabaylaha Jiilaalka. Waanu qarin doonaa waxa aan ilaa hadda ka garanayno dabaylaha taariikhda bilawga barafka Cusboonaysiinta iyo wax kasta oo aan ilaa hadda ka naqaanno e-buugga soo socda ee taxanaha khiyaaliga ah.
Kuwa aan garanayn, George Raymond Richard Martin, ama George Raymond Martin sida aynu dhammaanteen u naqaanno, waa 73 jir Mareykan ah hal abuur leh oo dhashay Sebtembar 20, 1948. GRRM waa naanays uu kasbaday isaga oo ka mid ah kuwiisa. taageerayaasha.
George R.R. Martin waa qoraa, laxamiistaha dabaqa gaagaaban, iyo agaasimaha telefishinka ee Maraykanka. Taxanaha HBO ee Game of Thrones waxa uu mar inta badan ku salaysnaa khayaalkiisii ​​A Heesta Barafka iyo Dabka.
Haddii aad tahay taageere Game of Thrones, waxaa lagu dhiirigelin doonaa sababtoo ah taxanaha TV-gu wuxuu hore u ahaa mid gebi ahaanba ku salaysan taxanaha buuggan, waxaana laga yaabaa inaad ku sii wadato safarka halyeeyada taxanaha buugan.
Kuwa kale waxay imaan doonaan Dabaylaha Jiilaalka, kaas oo qaadi doona tacliinta wax badan oo ka sii fog xagga woqooyi marka loo eego sheeko kasta oo hore. Marka laga reebo ugu yaraan hal marin colaadeed oo weyn oo ujeedo leh iyo dhaqdhaqaaqa xargaha shakhsiyeed ee soo afjaraya jeexjeexyada, cutubka hore, Qoob ka ciyaarka Dragons, ayaa ka kooban sheeko aad uga yar intii Martin uu filayay.
Waxaan ku furayaa labadii isku dhac ee weynaa ee aan ku dhisi jiray, dagaalka barafka iyo halganka Meereen - dagaalka Slaver's Bay, Martin wuxuu ku leeyahay Dabaysha Jiilaalka. Markaa halkaas ayaad ka heli kartaa. Qaybta Victarion Greyjoy waxay bilaabmi doontaa 5 ilbiriqsi kadib qoob ka ciyaarka Dragons-ku dhamaado, taasoo kuu soo dhawaynaysa imaatinka Ironborn ee Slaver's Bay habeenka imaatinka.
Qaybo ka mid ah qaabka Arianne Martell Martin ayaa ku dhawaaqay boggiisa in ay booqan doonto Griffin's Roost si ay u eegto ninka da'da yar ee iska dhigaya Aegon VI Targaryen. Martin wuxuu ka dhawaajiyay dhawaaqa murugada leh ee Dabaysha Jiilaalka inta lagu guda jiro Bandhiga Buugaagta 2016: Waxaan kaaga digayay 20 sano in jiilaalku soo socdo.
AKHRI WAX DHEERAAD AH : Oreshura Xilliga 2: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato!!
Soo bandhigida xilliga ay arrimuhu dhintaan oo ay noqdaan kuwo aan dhiig lahayn, oo dhaxan iyo habeen buuxo goobta, tani hadda ma aha dareenka farxadda leh ee ay aadamuhu jeclaan karaan. Qaar ka mid ah jilayaasha waxay ku yaalaan meelo iftiin yar. Arrimuhu way ka sii daraan ka hor inta aanay soo roonaan, sidaa awgeed arrimuhu dad badan bay ku sii xumaanayaan.
Sansa Stark waa jilaa Game of Thrones.
Tyrion Lannister waa curadka Tyrion Lannister
Arianne Martell waa jilaa British ah.
Arya Stark waa jilaa ka tirsan taxanaha HBO Game of Thrones.
La cusboonaysiiyay Sebtembar 25, 2021- Sida laga soo xigtay ilo gudaha ah, Dabaysha Jiilaalka ayaa la sii deyn doonaa Noofambar 13, 2023.
Marka laga reebo cadaymo kooban, George si daacad ah waxa uu u keenay beddelka saxda ah ee taariikhda dabaylaha Jiilaalka ee Abriil 2021. Maalintaas, waxa uu ku daabacay qoraal boggiisa Internetka ee Not A Blog kaas oo xaqiijinaya in aanu awoodi doonin in uu dhammeeyo buug waqti. Waxa uu ku andacoodey in jagadaas uu si weyn uga danbeyey xilligaas, iyo in suurtagalnimada in la isku dayo in la qabto ay tahay mid adag.
Markaad u tixgeliso faafitaanka inuu yahay deegaan dhibaato ku ah qof walba, sababta koowaad ee abuuruhu u isticmaali jiray inuu awood u yeesho inuu dhegeysto waa cudurka faafa. Way ku adkaan doontaa wax-soo-saarayaashu inay daayaan hal-abuurkooda inta lagu jiro xilligan adag.
AKHRI WAX DHEERAAD AH : Dragon Ball Super Season 2 waa dhamaaday! Taariikhda Siideynta & Cusbooneysiinta
2019, wuxuu taageerayaashiisa siiyay ogolaansho inay ku xidhaan qol ku yaal Island Island haddii uu dhamayn kari waayo dabaysha Jiilaalka Julaay 2020, inta lagu jiro WorldCon. Waxa uu nasiib u yeeshay in mid ka mid ah xertiisa uusan u dhaqaaqin inuu sameeyo waxa uu yidhi. Waa ammaan in la qiyaaso in uu awood u lahaa in uu dhamaystiro horumarinta jilayaashan iyo in uu awood u leeyahay in uu u gudbiyo jilayaal kala duwan tusaale ahaan.
Taasi waa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Dabaysha Jiilaalka. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay maqaalkan. Fadlan ku soo celi mareegahayaga wixii ku soo kordha iyo macluumaadka!
Xiliga 2: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad Ogaato!
Valorant Episode 4 Act 2: New Battle Pass, Your Rework & more more!
halkee baan ka daawan karaa aflaanta bilaashka ah aniga oo aan soo dejin ama iska qorin
bilaash ah 1 maalin xbox code toos ah
Daawashada bandhigyada tv -ga oo bilaash ah
sida loo helo ids song on roblox
filimada fiidiyaha ee bilaashka ah si aad uga daawato internetka
goobaha google oo leh giraangiro faraxsan
liiska track soundtrack ammaanka qaranka